နက်ေ၀ါ့ကိုပိတ်တဲ့ ဗိုင်းရပ် - MYSTERY ZILLION
January 2010 edited April 2010 in Antivirus & Virus
ကျွန်တော် ဟိုတလောက ကြုံလိုက်ရတဲ့ ဗိုင်းရပ် လေးပါ
Local Area Connection ကိုကိုက်တာပါ လုံး၀ကို အင်တာနက်သုံးလို့ မရတော့ပါဘူး
ပထမ ရက်ကတော့ သူ့ကို Diable လုပ်လိုက်ရင် မိနစ် ပိုင်း ကွန် ခဏ ပြန်ရပါတယ် နောက်တော့ နာရီပြတဲ့ Taskbar မှာ ဒီပုံလေးပေါလာပြီး လုံး၀ ကို မရတော့ပါဘူး
နောက်ရက်တွေ ကျတော့ လုံး၀ကို ကွန်မရတော့တာပါ ကျွန်တော်လည်း အလုပ်တွေ အရေးကြီးနေတာနဲ့ သူ့ကို Disable လုပ်ထားပြီ Wireless Adapter တတ်ပြီးတော့ ဆက်သုံးနေလိုက်တယ်
နောက်အားတော့မှ Local Area Connection ကို သေသေချာပြန်စမ်းကြည့်တော့ လုံး၀ ကို ကွန်က တတ်မလာပါဘူး
နောက်တစ်ခု ကျွန်တော်သွားတွေ့တာ ကတော့ ဒီပုံလေးတိုင်းပါ
Computer Management က Local User and Group ဒီ Error ပေါနေတာပါ
Kaspersky ကို Update လုပ်ပြီးတော့ လည်း စစ်ကြည့်တယ် ဘာမှ ကို မပေါ်ပါဘူး
Local စက်တွေကို တောင်လှမ်းပြီး Ping လို့မရတော့ပါဘူး
သူ့ ကို နိုင်မဲ့ Antivirus များရှိရင် ကူညီကြပါဦး
I got also similar problem like you before. that time, whenever connect to internet, it used to assign to some proxy address which is not right proxy address. then i found one software called "Melwarebyte". i tried and was able to remove one Trojan. U can download free version and scan ur computer.......
it might work..............get it from...
ကျွန်တော့်အထင်တော့ kido virus ပဲနေမှာပါ..သူကို့ kido virus killer software နဲ့သတ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေမှာပါတယ် ဘရို
ကျတော်မှာလဲ အဲဒီလို Network ကို ပိတ်တဲ့ Virus တက်ဖူးတယ် ။
Win32 Error Cleaner လေးနဲ့ သတ်လိုက်တာ အဆင်ပြေသွားတယ်။
Win32 Error Cleaner ကို Run တဲ့ အချိန်မှာ Network ကြိုးကို ဖြုတ်ထားဖို့ လိုတယ်။
အခု နောက်ပိုင်း CD ဆိုင်မှာ ရောင်းနေတဲ့ OKVirusCleaner CD မှာ အဲဒီနည်းကို တွေ့လို့ အဆင်ပြေသွားတာ။
http://ifile.it/guhtl26/Win32 Error Cleaner.rar
ဒါမှမဟုတ် အခွေလိုချင်တယ်ဆိုရင် CD ဆိုင်ပြေး၀ယ်လိုက်ပေါ့.....